Meteza ho mpilalao manana mpanaraka betsaka indrindra handresena ao amin'ny Crowd City | Androidsis
Crowd City dia noforonin'i VOODOO Ary mametraka anao amin'ny kiraro amin'ny maha-mpitarika anao izay manangana mpanaraka marobe mba ho mpilalao miaraka amin'ireo mpankafy indrindra ny lalao. Raha ny lojika, miaraka amin'ireo vondrona mpanaraka anao, ary raha mbola betsaka noho izy ireo ianao dia afaka manjaka mpilalao hafa hanafoana azy ireo ary hahazo ny anao.
Lalao mahafinaritra sy mahaliana izay avy amin'ny iray amin'ireo studio lalao video izay ny fanamafisana bebe kokoa dia ny fametrahana vola tsirairay amin'ireo lohateny izay mitondra mankany amin'ny Google Play. Izany hoe eo anelanelan'ny lalao sy ny lalao dia tsy maintsy tsindrio ny kisary X hanesorana ny dokam-barotra ary haka iray hafa. Ny fialana an'io lafiny io dia ny tena marina dia amin'ny ankabeazan'ny lalao dia matetika no mamaha ny lakileny fa tena mampiankin-doha.
1 VOODOO sy ny vahoaka
2 Vohay ny hoditra rehefa mahazo isa ao amin'ny Crowd City ianao
VOODOO sy ny vahoaka
Tsy toy ny Nintendo ary ny heviny fa ny filalaony dia tokony ho mahafinaritra kokoa Tsy banky piggy, VOODOO dia mifototra amin'ny lalao mahazatra izay ahafahantsika maka minitra vitsy hanana fotoana fohy sy mahafinaritra. Araho ny lalana navelan'ny Ketchapp Games, na dia tato ho ato aza dia miha malaza amin'ny karazana mahazatra amin'ny filokana miavaka izy io.
Ao amin'ny Crowd City dia tsy maintsy ho ianao no mpitondra tokony hahazo mpanaraka betsaka araka izay tratra. Ireto mpanaraka ireto dia hita eny amin'ny arabe mandehandeha miloko marevaka amin'izay fotoana hanatonantsika azy, manatevin-daharana ny vondrona mpankafy lehibe anay sy mpanaraka.
Amin'ity fomba ity dia hahazo bebe kokoa isika ka ny tanjona manaraka dia ireo mpilalao hafa izay ao amin'ny lalao an-tserasera. Ho hitantsika izany andiana kisary manondro ny toerana ary ny isan'ny mpanaraka azy ireo. Ny lokony no hahafantarana azy, noho izany tsy misy fomba tsara kokoa hanampiana mpanohana ny tanjontsika noho ny fitadiavana mpilalao izay tsy dia azony.
Vohay ny hoditra rehefa mahazo isa ao amin'ny Crowd City ianao
Ka hiatrika mpilalao hafa isika a tanàna fehezin'ny tranobe goavambe ary ireo arabe izay andehanan'ny olona an-jatony izay mety mandalo hanaraka ny tanjontsika. Tsy tena fantatsika izay amidinay, na raha mpanao politika izahay na amin'ny manaraka Gandhi, hanaraka anay fotsiny izy ireo amin'ny fotoana hanatonantsika akaiky kokoa.
Ny tsy azontsika dia ny fizika ny zavatra ho an'ny ampahany amin'ny fanaka izay ho hitantsika eny an-dalambe, na dia mieritreritra ny vokatra tokony hataon'ny mpanaraka maro aza isika amin'ny efijery, dia azontsika tsara kokoa ny antony ananan'izy ireo natolotra tamin'ny famoahana CPU bebe kokoa an'ny finday toy ny Galaxy S10 +.
Afaka manatsara ny haavony isika araka Andao hianika ny solaitrabe. Midika izany fa afaka mamoha hoditra vaovao isika hamelomana ny lalao. Ary ny marina dia ny fahitana biby marobe tonga ho antsika dia manova kely ny fisehoan'ireo stickmen miloko ireo. Mazava ho azy fa mamporisika anao izahay raha tsy manana finday misy fitaovana matanjaka be dia tokony handeha hitafy azy ireo ho an'ny lohahevitra fandentehana ny puce mobile.
Y mahita olona marobe mifindrafindra toerana amin'ny toerana iray manana zavatra izay mihantona. Indrindra indrindra rehefa misy mpilalao roa na telo miaraka amin'ny mpankafy marobe ary tampoka dia tampoka ny arabe ary be ny loha mivoaka.
Crowd City dia lalao iray izay tsy ratsy mihitsy amin'ny lafiny teknika ary mazava ho azy fa afaka mamindra mpanaraka maro dia maro isika amin'ny fotoana iray. Saripika tsara, saingy tsy dia mandeha any noho ny zava-bitan'ny lalao izany. Indrindra rehefa mihetsika endri-tsoratra marobe isika amin'ny fotoana iray.
Crowd City dia lohateny vaovao ho an'ny Android izay tokony hamindranao ny mpankafy rehetra azonao atao mba handresenao ny lalao amin'ireo mpilalao hafa izay hanandrana toy izany koa amin'ireo mpanaraka azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Mandrosoa mpanaraka an-jatony handresy mpilalao hafa ao amin'ny Crowd City
Samsung dia nanaparitaka finday avo lenta finday avo lenta